Wararka Xanta Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Yurub Ee Saaka: Grealish, Wijnaldum, Isco, Khedira, Lingard, Papastathopoulos
HomeHoryaalada KaleWararka Xanta Suuqa kala iibsiga iyo Wargeysyada Yurub ee Saaka: Grealish, Wijnaldum, Isco, Khedira, Lingard, Papastathopoulos
Manchester United ayaa weli xiiseyneysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Aston Villa Jack Grealish, oo 25 jir ah, waxaana ay miisaamayaan dalab ay u dirayaan xiddiga reer England xagaaga. (Dailmail)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Netherlands Georginio Wijnaldum, oo 30 jir ah, ayaa u cadeeyay Liverpool inuu doonayo inuu saxiixo heshiis cusub, laakiin labada dhinac ayaa weli ku kala qeybsamay shuruudaha. Iyadoo qandaraaskiisa haatan uu dhacayo xagaaga, wuxuu xor u yahay inuu la hadlo kooxaha kale laga bilaabo 1da Janaayo. (90min)
Dhanka kale, Liverpool ayaa wadahadalo kula jirtay wakiilka Sven Botman, kaasoo rajeynaya in Reds ay bisha Janaayo dalab u gudbiso Lille oo ku aadan 20 jir daafaca reer Holland ah ee U20 . (Podcast.google)
Tottenham ayaa ka cabsi qabta in goolhayaha reer France Hugo Lloris oo 34 jir ah uu ku biiro Paris St-Germain xagaaga waxaana ay durbaba raadinayaan bedelka ciyaaryahanka reer England ee West Brom Sam Johnstone, 27, iyo ciyaaryahanka reer England ee Manchester United Dean Henderson, oo 23 jir ah. (thesun)
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Juventus iyo Jarmalka Sami Khedira, oo 33 jir ah – oo qandaraaskiisa uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan – ayaa kala hadlaya Everton heshiiska uu kula joogo. (Dailymail)
Arsenal ayaa isha ku heysa inay keensato ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid iyo Isco inta ka dhiman xilli ciyaareedkaan laakiin waxa ay wajahayaan sugitaan si ay u eegaan hadii kooxda reer Spain ay sii deyn doonto 28 jirkaan bartamaha xilli ciyaareedka. (Goal.com)
Daafaca dhexe ee Arsenal iyo Greece Sokratis Papastathopoulos, oo 32 jir ah, ayaa ku dhow heshiis ku saabsan u dhaqaaqista kooxda reer Turkey ee Fenerbahce. (Takvim, af Turki)
Kooxda Man United ayaa dardar galisay xiddiga khadka dhexe ee reer England ee Jesse Lingard hal sano oo dookh ah halka 28 jirkan heshiiskiisu haatan soconayo ilaa xagaaga 2022. (Sky Sports)
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee reer Wales Daniel James, 23, ayaa ka tagi doona Manchester United bisha Janaayo iyadoo West Brom ay ugu cadcad tahay saxiixiisa. (Todofichajes)
Daafaca reer Spain Eric Garcia, oo 19 jir ah, ayaa heshiis la gaaray Barcelona si uu dib ugu biiro iyaga oo uu qalinka ugu duugo heshiis shan sano ah ka dib markii uu dhacay qandaraaskiisa Manchester City bishii June, waxaana kooxda reer Catalan laga yaabaa inay isku daydo inay dhameystirto heshiiska bisha Janaayo. (CBSsports)
Garabka kooxda Leicester Demarai Gray, oo 24 jir ah, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaa si bilaash ah ku doonaya kooxaha Roma iyo Benfica. (thesun)
Wakiilka Mino Raiola ayaa diiday wararka sheegaya in Borussia Dortmund iyo weeraryahanka reer Norway Erling Haaland oo 20 jir ah ay ku biirayaan Barcelona hadii Emili Rousaud uu ku guuleysto doorashada soo socota ee kooxda. (90min)
Real Madrid ayaa kalsooni ku qabta inay Haaland kala soo saxiixan doonto Borussia Dortmund. (AS)
Chelsea ayaa kula biirtay kooxaha AC Milan iyo Nice xiisaha ay u qabaan daafaca reer France ee Strasbourg Mohamed Simakan, oo 20 jir ah (Le10 Sport,)